တစ်လှူမှသည် နှစ်လှူသို့ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Events/Fundraise » တစ်လှူမှသည် နှစ်လှူသို့	50
Posted by ကထူးဆန်း on Jul 1, 2012 in Events/Fundraise | 50 comments
ရခိုင် သွေးချင်းတို့အတွက် လက်ဆောင်
ကထူးဆန်းတစ်ယောက် တစ်တောင်ကို ကုလားထိုင် လက်တန်းပေါ်ထောက် မေးကိုလက်ဖ၀ါးပေါ်တင် မျက်စီပိတ်၍ စဥ်းစားခန်းထုတ်သည် ။ မျက်မှန် အသာမ၍မျက်စိမှိတ်၊ နှာရိုးထိပ် အား နှိပ်နှယ်ရင်းလည်း စဉ်းစားသည် ။ ထိုသို့လုပ်ကာလုပ်ကာ စဉ်းစာ နေသည်မှာ ခြောက် ရက်ခန့်ရှိပြီ။
လုပ်သင့် ။ မလုပ်သင့် ။
ပြောသင့် ။ မပြောသင့် ။
ပြောလိုက်လို့စိတ်ဝမ်းတွေ ကွဲကုန်လျှင်လည်း ဒုက္ခ ။
နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည် ။
မပြော မပြီး မတီး မမည် ။
ပြောလိုက်မည် ။ ပြောလိုက်မည် ။
နောက်ဆုံး အတီးခံရလည်း ဦးပေ တစ်ယောက်လုံးပြောထားတာ ရှိသည် ။ ဒါနဲ့ လျှောချရမှာဘဲ ဟု စဥ်းစားလိုက်မှ ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာသွားသည် ။
့ ဇွန်လ သုံးဆယ် ရက်နေ့သည် ကထူးဆန်းတို့ ရခိုင်သွေးချင်းတို့ ကို လက်ဆောင်ပေးရအောင်ဆိုကာ အလှုခံသော နောက်ဆုံး ရက် အဖြစ် မှုလ က သတ်မှတ်ထားသော ရက်ဖြစ်သည် ။
မနေ့က အထိ ရွာသူ ရွာသားတို့၏ သွေးချင်းတို့ အပေါ် စာနာစိတ်နှင့် စေတနာတို့ ကိုမျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့ခဲ့ရသည် ။
စုစုပေါင်း ၈၄ ဦးမှ လှုဒါန်းခဲ့ပြီး အလှုငွေ ၃၅၆၆၈၀၀ ကျပ် ( သုံးဆယ့်ငါးသိန်း ခြောက်သောင်း ခြောက်ထောင် ရှစ်ရာ ကျပ် တိတိ) ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည် ။
ထိုအချိန်တွင် အစကတည်းက ယိုင်တိုင်တိုင် ဟု ကိုယ့်ဟာကိုယ် နောက်ပြောင် ရေးခဲ့သော ကထူးဆန်း သည် စကားနောက် တရားပါ တကယ်ပင် ယိုင်တိုင်တိုင်ဖြစ်နေမှန်း လွန်ခဲ့သော ခြောက်ရက် က သိခဲ့သည် ။
အဲ့ဒါ ကတော ကထူးဆန်း ကောက်ခံရငွေ အချို့ ကို ခွဲဝေ လှုဒါန်းလိုစိတ် ပေါ်ပေါက်လာခြင်းပင်ဖြစ်သည် ။
ရွာသား ကြီး ကိုထွန်းဝင်းလတ် ၏ one candel စေတနာရှင် လူငယ်များ အဖွဲ့၏ လှုပ်ရှားမှု့ ပုံရိပ်များ သည် ကထူးဆန်းကို လေပေါမနေနဲ့ ဟု သတိပေးနေသည့် ပမာ ။
ကိုထွန်းဝင်းလတ် တို့ မိုးထဲရေထဲ တစ်ရွာဝင် တစ်ရွာထွက် တောအုပ်ကိုတိုး ချောင်းကို ကျော်ဖြတ် ကာ ရွာငယ် များ မှ သွေးချင်းများထံ အရောက်သွားကာ ခလေးငယ်တို့ အတွက် တတ်နိုင်သမျှလှုဒါန်းနေသည် မှာ အားကျစဖွယ်။ ဂုဏ်ယူစရာ။
ကိုထွန်းဝင်းလတ် ၂၄ ရက် ဇွန်လ မှာ တင်လာတဲ့ one candle စေတနာရှင်လူငယ်များ အဖွဲ့၏ ခရီးစဉ်(၄) http://mandalaygazette.org/132880/travel ထဲက ဓါတ်ပုံတွေ ကို တွေ့တဲ့ အချိန်မှာ အဲ့ဒီရွာလေးအကြောင်း မေးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
ရွာလေးရဲ့ အမည်က မှုလခေါင်တုန့်စည်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။
မူလခေါင်တုန့်စည်ရွာလေးသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အင်းတော်မြို့နယ်
မော်လူးဒေသတွင် တည်ရှိပါသည်။ ရွာလေးမှာ မော်လူးမှ မိုင်
၂၀ကျော်ကွာဝေးပြီး နွေရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီတွင် ဆိုင်ကယ်လမ်း
သစ်ထုတ်ရေးကားလမ်းပေါက်ပါသည်။မိုးရာသီတွင် နွားလှည်း ခြေကျင်ဖြင့်သာ
တည်ရှိခဲ့သောရွာလေးဖြစ်မည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။ သို့သော်
သမိုင်းအထောက်အထား ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိသည့်အတွက်
သေချာမပြောနိုင်သော်လည်း ပါးစပ်ရာဇ၀င်များ အမြောက်အများရှိနေခဲ့ပါသည်။
ရွာလေးသည် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၂၇ခုနှစ်တွင် သောင်းကျန်းသူများ၏
မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရပါသည်. တစ်ရွာလုံးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းပါ
မကျန် မီးလောင်ခဲ့သောလည်း ပုံတွင်ပါရှိသည့် မြန်မာသက္ကရာဇ်
၂၈၁ကျပ် ၁၀ပဲသာကုန်ကျကြောင်း မှတ်တမ်းတွေ့ရှိရပါသည်။
မီးလောင်ပြာကျခဲ့သဖြင့် ရွာသူရွာသားများ ၄င်းရွာလေးနှင့်
၅မိုင်ခန့်ကွာဝေးသော နားမကျိုင်းရွာလေးသို့ ပြောင်းရွေ့လာခဲ့ကြရပါသည်။
ရွာသူရွာသားအများစုမှာ ရှမ်းဗမာများဖြစ်ကြပြီး လယ်ယာလုပ်ငန်း
၄င်းရွာလေးမှာ ဆောက်လက်စ ကျောင်းကို ကထူးဆန်း သတိပြုမိပါသည် ။
ဆောက်လုပ်ဆဲမှာ တန်းလန်းရပ်နေသော ကျောင်းကလေး
ဆောက်လက်စကျောင်းဟု ဆိုထားသော်လည်း ဘေးမှာ ပစ္စည်းတွေ စုပုံထားခြင်းမရှိကြောင်း သတိပြုမိပါတယ် ။ ဒါနဲ့ ကိုထွန်းဝင်းလတ်ကိုမေးကြည့် တော့
ဘုန်းတော်ကြီးမှ ဦးဆောင်ကာ ရွာသူ/သားတို့၏
ဆောက်လုပ်နေဆဲတွင် ငွေကြေးအခက်အခဲကြောင့် ရပ်နားထားရကြောင်း သိရှိရပါသည်ခင်ဗျာ…။ရွာလေးတွင် အိမ်ခြေသုံးဆယ်ခန့်ရှိပြီး မူလတန်း ကျောင်းသား/သူဦးရေ ၃၅ဦးရှိပါသည်။
ကျောင်း အကျယ်အ၀န်းက ၁၄၅၈ square feet ခန့်ရှိသည်။
မိုးစ၇ာ သွပ် လည်း မရှိသေးဟုသိရသည် ။
အမိုးဖိုးက အကြမ်းဖျင်း တွက်ကြည့်သည်မှာ သွပ် ၊ သွပ်သံ ၊ ခေါင်အုပ် ခြောက်သိန်းဘိုးခန့် ကုန်မည်ဟု ခန့်မှန်းကြည့်မိသည် ။ အတိအကျတော့မသိ ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစားရိတ်နှင့်ဆို ဒါထက်လည်းပိုကုန်နိုင်သည်။ အတိအကျတော့ တွက်ခိုင်းပြီးမှသာလျှင် သိ ရပေမည်။ အနီးဆုံး မန္တလေးမှ သွပ် ၀ယ်ပို့ပေးနိုင်လျှင် မည်မျှ ကောင်းလိမ့်မလဲ။
အဲ့ဒီလို သိလိုက်ရတဲ့ အချိန်က စလို့ ယိုင်တိုင်တိုင် ကထူးဆန်း တစ်ယောက် ရခိုင်အလှုငွေကို ကချင်ပြည်နယ် က ရှမ်း တိုင်းရင်းသား ခလေးများအတွက် ခွဲဝေလှုဒါန်းချင်စိတ် ပေါ်တော့တာပါ ။
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x
ဒီလိုခက်ခက်ခဲခဲ သွားဖို့တော့ လိုပါမည်။
ကိုထွန်းဝင်းလတ်တို့ အပင်ပန်းခံ အရောက်သွားလှုတာတွေ့တော့ တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာကို တိုက်ရိုက် ရောက်တဲ့ အလှုပါလားလို့ တွေးမိပါသည် ။ မည်မျှချီးကျူးဖွယ်ကောင်းလေစွ ။ မည်မျှ အားကျဖွယ်ကောင်းလေစွ ။ ကိုယ်တိုင်မသွား နိုင်သော်မှ ကိုယ်တိုင်သွားနိုင်သူ အား တစ်တပ်တစ် အားပေးချင်စိတ်များ ဖြစ်ပေါ်မိသည်။
ထိုအချိန်မှာ ဆောက်လက်စကျောင်းတွေ့တော့ တတ်နိုင်သလောက် ပန့်ပိုးချင်စိတ်ပေါ်မိလာသည် ။
ကိုယ့်လိုဘဲ သူများတွေလည်း ပေါ်မိမှာ မလွဲ ဟု ယူဆမိသည် ။
ရွာ့အလှုဖြစ်အောင် ထပ်မံ ၀ိုင်းဝန်းကြရအောင်ကလည်း ယခု မှ ရခိုင်အတွက် ကောက်ခံတုန်းရှိသေးသည် ။ ထပ်ကောက်ခံကြမည်ဆိုလျှင် ရွာသားတို့ လှုချင်သော်မှ လှုရန် ခက်ပေလိမ့်မည် ။
တစ်ဘက်မှ ကြည့်လျှင်လည်း မိုးတွင်းရောက်နေပြီး ကျောင်းမပြီးသေး၍ စာကို အခြားနေရာ၌ သင်နေရသည် ။ မြန်မြန်ပြီးလေ မြန်မြန်ကောင်းလေ ဖြစ်ပေမည်။ နောက် သုံးလေးလ လောက်မှ ထပ်ကောက်ကြရအောင် ဆိုလျှင်လည်း အလှုကောက်ခံပေး နေသော သူများကိုလည်း အားနာလှပြီ။ မိုးထဲရေထဲ ကိုယ့်စားရိတ်ကိုယ်စား ကိုယ့်ဖုန်းဘိုး ကိုယ် အကုန်ခံ၊ ရုံးဖျက် အလုပ်ဖျက်ကြကာ လုပ်ပေးနေသည် ကို အားနာလှပါသည်။
ကျောင်းကလည်း ဆောက်လက်စ ငွေ မလိုက်နိုင်၍ ရပ်သွားသည် ဆိုတော့ အရေးပေါ် သလိုဖြစ်လာသည် ။ ရွာခံ ဒေသခံများလည်း မြန်မြန်ပြီးချင်ကြမှာ မလွဲ ။ ယခု လို တစ်ဘက်မှ အားကိုးရှာစဉ် ၊ အခွင့် အရေး ပေါ်ပေါက်စဉ် ၊ လိုအပ်နေစဉ် လှုသော အလှုသည် ပိုပီတိ ဖြစ်ဖွယ် စိတ်ကျေနပ်ဖွယ် ဖြစ်မည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။
ထိုစဉ်က စလို့ ရခိုင် အလှုမှ သိန်းသုံးဆယ်ကို ရခိုင် အသင်းသို့လှုဒါန်း၍ ကျန်ငွေကို လိုအပ်သော သွပ်များ ၀ယ်ပေးရလျှင် ကောင်းလေစွ ဆိုသော တစ်လှုမှသည် နှစ်လှုသို့ ချင်ခြင်း ကပေါ်ပေါက်လာသည် ။
ထိုသို့ သော အတွေးမျိုး အချို့လည်း တွေးမိကောင်း တွေးမိမလားဟု မျှော်လင့်မိသည် ။
ပြောရမှာ များ အားနာလို့လား ဟု ။
သို့်သော် ကိုထွန်းဝင်းလတ်က ကျွန်တော့်ကို သတိပေးသည် ။
ရခိုင် အထဲကတော့ မဖဲ့စေချင်ပါ…
ဘာလို့လည်းဆိုတော့ လှူတဲ့သူတွေက ရခိုင်သွေးချင်ေးတွအတွက် ရည်ရွယ်ပီး လှူထားတာမို့
တခြားကို လှူမယ်ဆိုရင် သူတို့တွေရဲ့သဒ္ဓါတရား ပျက်သွားနိုင်ပါတယ်..ဒါဆို
လုပ်ရတဲ့ ကိုထူးဆန်းတို့ အတွက်ရော လှူတဲ့သူတွေအတွက်ပါ စေတနာကနေ
အစကတော့ ကထူးဆန်း ဘယ်သူမှ မပြော ပိုစ် အဖြစ်သာ တင်လိုက်မည် ကြံရွယ်သေးသည် ။ သို့သော် ဆိုးတူ ကောင်းဖက် အတူ လုပ်လာပြီးမှ အတွေးခေါင်သူ တစ်ဦး ကထူးဆန်းကြောင့် ကျန်သူများကို အပြစ်မြင် အပြစ်တင်မခံစေချင်ပါ ။ သို့နှင့် ယနေ့ (၁-၇-၂၀၁၂) လူစုံမိတော့ အသိပေးဖြစ်သွားသည်။
ပထမတော့ အားလုံးက ကိုထွန်းဝင်းလတ်လိုပင် စိုးရိမ်ပူပန်ကြသည် ။
ရခိုင်ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီးမှ တစ်ခါ အခြားလှုတာ မဖြစ်သင့်ဟု တားမြစ်ကြသည် ။
တကယ်တော့ အမတ်မင်း၊ ကိုရွှေတိုက်စိုး၊ ဘဘဘလက် တို့ကကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ထည့်ဝင်ရန် စိတ်ကူးထားပြီးဖြစ်သည် ။ ကိုအညာတမာ ကလည်း ရခိုင်အလှုကိုမထိဘဲ ကိုယ့်နီးစပ်ရာ ကိုယ် စုလိုက်ကြရင် ဖြစ်သွားမှာပါ ဟုဆို၏ ။
နောင်ဘ၀ နတ်ပြည်တက်ကြရာတွင် အငြင်းပွားခြင်း အနုပညာ ရသ ဆက်လက်ခံစားလိုသော ကထူးဆန်းကတော့ နတ်ပြည်မှာ ရွာသူရွာသားများနှင့် ပြန်ဆုံရအောင် ရွာ့ အလှုအဖြစ် အားလုံးစုပေါင်းလုပ်စေချင်သည်။ :grin: သို့သော် နောက်ထပ်လည်း ထည့်ဝင်ကြပါ မပြောလိုဟု အဆိုပြုတော့ ဘဘဘလက်တို့ စုစုပေါင်း အနည်းဆုံး ၈၀ % ကို ရခိုင်ဒေသ သို့ ထည့်ဝင်ပြီးကျန် ၂၀ % ကို ကချင်ပြည်နယ် က ရှမ်း သွေးချင်း ကလေးငယ်တို့အတွက် ထည့်ဝင်ကြတာပေါ့ဟု သဘောတူညီချက် ရရှိခဲ့ပါသည် ။
သို့သော် အလှုရှင် ရွာသူရွာသားများ၏ သဘောတူညီချက်က လိုနေသေးပေသည်။
ရခိုင်ခေါင်းစဉ်မှ ရခိုင်ခေါင်းစဉ် ။ ဆုံးဖြတ်ပြီးသား မို့လို့ ခွဲလှုတာ မလုပ်ချင်ပါဆိုလျှင်လည်း ကျွန်တော် ထိုသူ၏ အလူငွေ အပြည့်အ၀ ရခိုင်သွေးချင်း များထံရောက်ရှိစေရန် တာဝန်ယူ ပေးလှုပေးပါမည်။ အားနာရန် မလို အသိပေးနိုင်ပါသည်။ ကိုယ့်အတွေးနှင့်ကိုယ် ( ကြော်ငြာဝင်တာ :grin:) ဆိုသည်ကို လုံးဝ နားလည် လက်ခံပါသည် ။
သို့သော် ကျွန်တော်ကတော့ ရွာသူ ရွာသားများအား ယုံကြည်သည်။ ကျွန်တော်တို့မှ အခြားသွေးချင်းများလည်း ရှိပါသည်။
ဆွေးနွေးကြပြီး အဖြေတစ်ခု ကို ထုတ်နိုင်လိမ့်မည် ဟု ။
X x x x x x x x x x x x xx x xx x x x x x x x x x x x x x x x
ရွာသူ ရွာသားတွေကို ထပ်ပြီး ခေါင်းစားစေသည်ဆိုလျှင်လည်း တောင်းပန်ပါသည်။
ဦးပေ စကားနှင့်သာ လျောချလိုပါသည် ။
စေတနာ မှ ဝေဒနာ ဖြစ်အောင် လုပ်မိခဲ့လျှင် ကျွန်တော် ငမိုက်သား ကထူးဆန်း တစ်ဦးထဲ၏ စေတနာ အမှားသက်သက်သာဖြစ်ပါသည်။
(တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် လူစုခွဲပြီးပြန်လာတော့ FM ကနေ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး ဥက္ကဌ ဦးဇင်ဝိုင်းကို အင်တာဗျုးတာ နားထောင်လိုက်ရပါသည် ။ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံးမှလည်း ကချင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည် အမည်တပ်၍ အလှုငွေ ကောက်ခံနေရာမှ ရခိုင် ပဋ္ဋိပက္ခ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သောကြောင့် ရခိုင်ဒေသတို့ ၄င်း အလှုငွေမှပင် ခွဲဝေ လှုဒါန်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ အားလုံးကလည်း သဘောတူညီလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း ပြောနေသည်ကိုနားထောင်လိုက်ရပါသည်)
has written 93 post in this blog.
King of Secrets (Bo Min) says: Thanks.
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2192
htoosan says: ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ရမဲ့ အချိန်ရောက်ပြီမို့ ကျွန်တော်နားလည် ခံစားရမိသလောက် (၁) ပထမ ခေါင်းစဉ်အတိုင်းသာ လှုသင့်ပါသည် ဆိုလာသူ (၇) ဦး (၂) အများသဘောပါ ဆိုလာသူကြားနေ ဟုယူဆမိသူ (၆) ဦး
(၃) ခွဲလှုနိုင်ပါသည်လို့ ပြောသူ (၁၈) ဦး (၄) ဘယ်လိုသဘော ပြောမှန်း မှန်းဆလို့ မရသူ (၄) ဦး လို့ ကျွန်တော် ရီလို့ ရပါသည်။
ကျန် ဘယ်မှ မှတ်ချက်မပေးသော အလှုရှင်များကိုတော့ ကြားနေ အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပါ့မယ်။ ထို့ကြောင့် မလစ်တလစ်ဘယ်ရယ် ဒီမိုရွာမှာ ခွဲလှုနိုင်ပါသည်ဆိုသည်ဘက်သို့ မဲများနေသည့် အတွက် ကျွန်တော်တို့ခွဲလှုပါ့မယ် ။ ယနေ့ နောက်ဆုံး ရရှိထားသည်မှာ ၃၈၀၆၈၀၀ ကျပ် ( သုံးဆယ့်ရှစ်သိန်း ခြောက်ထောင့် ရှစ်ရာ ကျပ်) မှ ၃၂ သိန်းအား ရခိုင်သွေးချင်းတို့ အတွက် လှုဒါန်းပြီး ကျန် ခြောက်သိန်းခြောက်ထောင့် ရှစ်ရာ နှင့် ထပ်မံ ရရှိခဲ့မည်ဆိုပါက ၄င်းတို့ကို ကချင်သွေးချင်း ပညာရေးအတွက် လှုဒါန်းပါမည်။
တကယ်တော့ ကျောင်းလေးမှာက အမိုးအပြင် အိမ်သာ အကာ အခင်းတွေလည်း လိုဦးမှာပါ ။ အဲ့ဒါတွေကတော့ နောင်များမှ ၀ိုင်းကြတာပေါ့ ။ အမိုးရပြီမို့ အကာ အခင်း ယာယီလုပ်ပြီးကျောင်းစတင်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါသည် ။
ထပ်လှုမည်ဆိုသူများရော ၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရင်ထဲမှ ဆန္ဒ အတိုင်းပြောသောသူများအားလုံး နှင့် အလှုရှင်များ အား လုံးအား များစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။